बासी रोटी सेवन गर्दा हुन्छन् यी फाइदा !
July 1, 2021 N88LeaveaComment on बासी रोटी सेवन गर्दा हुन्छन् यी फाइदा !
मानव स्वास्थ्यका लागि रोटी खानु राम्रो मानिन्छ । अहिले पछिल्लो समयमा झन रोटीको सेवन बढ्दो देखिन्छ । कसैको घरमा रातको समयमा त कोहीको बिहान रोटी बनाएर खाने गरेको देखिन्छ ।कोदो,मकै,मैदा, आटा, फापर आदिबाट रोटी बनाउन सकिन्छ । कतिपयले दिउँसोको समयमा रोटी बनाएर खाने गर्छन् । अरु खाने कुरा बासी खादा स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । […]
July 1, 2021 N88LeaveaComment on ओली-माधवलाई भेँडा भन्दै कांग्रेस माओवादीलाई गोकुल बाँस्कोटाले दिए दनक
काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादमा पस्दा नेपाी कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र आफै संकटमा पर्ने बताएका छन् । उनले एमालेको झगडामा प्रवेश गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र आफै खुइलिने भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीहरूलाई भेडाको संज्ञा दिँदै पूर्व सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका बाँस्कोटाले दुइटा भेडा जुधिरहेका बेला तेस्रो भेडा […]
देउवा र पौडेल दुवै खेमामा लफडा, अब को कता ?
July 1, 2021 N88LeaveaComment on देउवा र पौडेल दुवै खेमामा लफडा, अब को कता ?
काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसमा एकाथरी नेता कार्यकर्ता पार्टी एकढिक्का हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अर्कातर्फ काँग्रेसमा गुट उपगुट बढ्ने र नयाँ ध्रुवीकरण हुने क्रमले गति लिएको छ । भदौमा तय भएको १४औं महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमामा फुट देखिएको छ । देउवाबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि टाढिएका छन् । […]
आफ्नै खुट्टामा ब ञ्चरो हान्दै माधव नेपाल, गुमाए अन्तिम अवसर
July 1, 2021 N88LeaveaComment on आफ्नै खुट्टामा ब ञ्चरो हान्दै माधव नेपाल, गुमाए अन्तिम अवसर
काठमाडौं। नेकपा एमालेको विपक्षी गुटमा सक्रिय नेता माधवकुमार नेपालाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा अर्काे मौका दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । नेकपा एमाले एकता हुनसक्ने आधारका रुपमा बन्न सक्ने यो अवसर नेता नेपालसमुहले भने गुमाउन खोजेको छ । नेपाल समुहले सो बैठकमा सहभागी […]
डा. जागेश्वर गौतमले चार अर्ब अनियमितता गरेको खुलासा
July 1, 2021 N88LeaveaComment on डा. जागेश्वर गौतमले चार अर्ब अनियमितता गरेको खुलासा
काठमाडौं । वीर अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमविरुद्ध कोभिड उपचारका लागि खरिद गर्न लागिएको स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लगि सेटिङमा टेन्डर आह्वान गरेको आरोपमा न्याम्सका उपकुलपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी परेको छ । विशेष स्रोतका अनुसार अस्पताल कर्मचारी परिवारको तर्फबाट डा. गौतमले नयाँ सर्जिकल भवन सञ्चालनका लागि चार […]
देउवा प्रचण्ड माधवकाे प्लान फेल, प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पक्षमा फैसला
July 1, 2021 N88LeaveaComment on देउवा प्रचण्ड माधवकाे प्लान फेल, प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पक्षमा फैसला
काठमाडाैं । सरकारी पक्ष र प्रधनमन्त्रीका निजी वकिलले राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै एमाले सांसद लिएर नेपाली कांग्रेसमा सभपति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नपाउने तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार विपक्षीका कानुन व्यवसायीली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाउ गर्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नै दायर हुन नसक्ने दाबी गरेका छन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित […]
गुडिरहेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खस्यो
July 1, 2021 N88LeaveaComment on गुडिरहेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खस्यो
पाेखरा । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खसेको छ । पहिरोले खसेर बिरामीको मृत्यु भएको छ । मादी गाउँपालिका–९ मुग्रीबेंसीबाट बिरामी लिएर थुम्सीकोटतर्फ जाँदै गरेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खस्दा एम्बुलेन्समा सवार बिरामी ८३ वर्षीय गोमा अधिकारीको मृत्यु भएको हो । मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङका अनुसार दुर्घटनामा एम्बुलेन्स चालक सुवास अधिकारी घाइते भएका छन् […]
राष्ट्रपतिलाई हु आर यू भन्ने शम्भु थापालाई सुशील पन्तले दिए कडा जवाफ
July 1, 2021 July 1, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपतिलाई हु आर यू भन्ने शम्भु थापालाई सुशील पन्तले दिए कडा जवाफ
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने जिकिर गर्दै विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘तिमी को हौ ?’ भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई जवाफ दिँदै पन्तले भने–‘कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा ल्याउने, अनि राष्ट्रपतिलाई हु आर यू भन्ने ?’ जेठ ९ मा निवेदकको तर्फबाट बहस गदै वरिष्ठ अधिवक्ता […]
तीन नेतापुत्रको भाते बैठक : कांग्रेसमा बन्याे नयाँ समीकरण
July 1, 2021 N88LeaveaComment on तीन नेतापुत्रको भाते बैठक : कांग्रेसमा बन्याे नयाँ समीकरण
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका युवराज भनेर चिनिने तीन नेतापुत्र सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि केही समययता दिनहुँजसो भात बैठक गरिरहेका छन् । उनीहरुले नेतृत्वको पुस्तान्तरणका लागि नयाँ समीकरणको प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । कांग्रेसको संगठनमा ताजापन, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र युवा पंक्तिको वर्चस्व आजको आवश्यकता पनि हो । नेतृत्वमा वैचारिक स्पष्टता र सांगठनिक गतिविधिमा […]
चितवनमा बा’ढीको बि’तण्डा : ग्यास उद्योगमा बा’ढी पसेर सिलिन्डरको खोलाे बग्य (फाेटाेफिचर)
July 1, 2021 N88LeaveaComment on चितवनमा बा’ढीको बि’तण्डा : ग्यास उद्योगमा बा’ढी पसेर सिलिन्डरको खोलाे बग्य (फाेटाेफिचर)
चितवन । अविरल वर्षासँगै आएको बा’ढीका कारण चितवनस्थित ग्यास उद्योगमा ठूलो क्ष’ति पुगेको छ । खयर खोलामा आएको बा’ढीका कारण चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१ मा रहेका ग्यास उद्योगहरुमा क्षति पुगेको हो । बिहान ६ बजे पसेको बा’ढीले सो क्षेत्रमा रहेका बाबा ग्यास उद्योग, साईबाबा ग्यास उद्योग, नेपाल ग्यास उद्योग लगायतमा क्ष’ति पुगेको जनाइएको छ । ती’व्र […]